Uphawu lwenkwenkwezi ye-Aries: Iimpawu zoMqondiso wee-Aries, Ubuntu, iiMpawu - Iimpawu Zezodiac
Uphawu lweAries: Iimpawu, Ubuntu kunye neempawu
Hamba! Hamba! Hamba!
Ii-Aries ziibhetri zezaga ze Zodiac . Inzondelelo yabo iphela kunye namandla angenamda enza ukuba wonke umntu ojikeleze kubo azive ediniwe ngokujonga nje wonke umsebenzi. Yintoni enokufezekiswa ngulo Mqondiso weLanga kugxilwe, kodwa olona hlobo lwabo luhlangulayo sisibindi sabo.
Uluhlu lwee-Aries Iziqulatho
Uphawu lweAries kunye nentsingiselo yalo
Ukuhambelana-Kuthando kunye neBhedi
I-Aries yaBantwana (Intombazana kunye neNkwenkwe)
Umsebenzi, izilwanyana zasekhaya kunye nexesha lokuzonwabisa
Izipho eziPhambili zeeAries
Buyela kuzo zonke Iimpawu zeNtshona Zodiac
Iimpawu ze-Aries, Ubuntu, kunye neempawu
Ii-Aries ziya kuhamba ziye kwiindawo apho kungekho mntu unokuzama ukuya khona, zibeke kwi-persona yazo kunye 'nenkunzi yegusha' ngqo kwingxaki.
I-Aries ayikuthinteli ukuphepha- vele ufike kwinqanaba kwaye uqhubeke nezinto.
Abanye abantu kwesi sangqa sesilwanyana seZodiac babona ii-Aries ngokungxama, kwaye iiAries zinokwenza kakuhle ukuba okungenani ziqwalasele umbono wazo. Kungenzeka ukuba ngamanye amaxesha ukuyeka nokucwangcisa okuncinci kunokukugcina kwiingxabano ezingathandekiyo.
Xa unee-Aries ebomini bakho ujongana neplanethi elawula iMars, owayenguThixo wemfazwe. Ke inkunzi yegusha yakho ayinakukwazi ukuhlala izolile xa kujongwana nengxabano okanye imiqobo.
I-Ram ayizukuhlala isenza 'imfazwe', kodwa ayizizo ezo zokunika ii-T-shirts zoxolo-amandla oxolo nokuba. Isifundo sobomi esiphambili kuninzi lweeAries yindlela yokuthatha eso sixhobo samandla kwaye ufumane iindlela zokuwusebenzisa ngengqondo nangokucacileyo, ngaphandle kokuphendula okuzenzekelayo.
Ngokwesiqhelo ama-Aries angena phantsi kolawulo lwe Umlilo . Oku kukongeza koovimba bamandla eRam, kodwa kukwadala imeko engalindelekanga kakhulu. Ama-Aries anokufudumala kwaye aqhakazile okanye isiqhwithi somlilo.
Ngombulelo abo balandela ii-Aries kungquzulwano bafumanisa ukuba bayayazi indlela yokuphila, kwaye abanamathandabuzo okuboleka ezo zakhono kwiimeko ezinzima ukuba abalandeli bamamele ukukhokelwa kweRam.
Iimpawu zomzimba ezi-Aries kunye neMpawu
I-Aries 'cut' ine-geometry ecacileyo kunye ne-chin ekhethiweyo kunye nomlomo ochazwe kakuhle. Ngenxa yenqanaba lomsebenzi wabo, imizimba yabo ihlala ihontiwe, iimbaleki kunye nokujonga okuxananazileyo.
Impilo enobulumko lo Mqondiso weLanga awunangxaki ngokugcina. Elona candelo lomzimba wabo ekufuneka likhuselwe ngenyameko yintloko yabo. Ukuba ii-Aries ziceba ukubandakanyeka kwimidlalo yokweqa izixhobo zokukhusela intloko ayisiyiyo inketho.
Qaphela ukuba abo bazalwa phantsi kwalo Mqondiso we-Astrological bane-metabolism engeyiyo (ewe, sonke sinomona) kodwa oko kuthetha ukuba bayakudinga ukutya ukutya okubagcina bengakhange bancame isondlo.
Ibali lama-Aries linxulunyaniswa nentsomi yamaGrike malunga noboya begolide. Ibali liya kuthi uPoseidon wayenguyise weRam, eyanikwa njengesipho kuKumkani uAeetes. Ukumkani wabeka uboya begolide phantsi kokhuseleko lwenamba. Kude kube uJason (kaJason kunye nodumo lweArgonauts) abuyise uboya begusha akazange athathe indawo yakhe efanelekileyo kwitrone yaseThesaly. UJason waphumelela ngoncedo lweMedea kwaye wabeka uboya kwitempile kaZeus.
Enye yezinto ezibalulekileyo ze-Aries kukuba iLanga liwele i-ikhweyitha lisinge emantla liye emazantsi kwiVernal Equinox. Oku kuphawula usuku lokuqala lwentwasahlobo, olonyuse eli qela lomanyano lomlilo.
Iinyani zee-Aries kunye neMibutho yeMetaphysical
Imihla: Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Matshi-Epreli 19
Ibinzana eliphambili: 'Ndingu'
Ilitye lokuzalwa: I-Aquamarine (ngoMatshi); IDayimane (Epreli)
Inani lokungcangcazela: Amanani 9
Intyatyambo: I-Honeysuckle kunye nePea emnandi
Chakra: IPlexus yeSola (Manipura)
Iwele lamaTshayina leZodiac: Inyoka
Amawele amaTshayina eZodiac amawele: Inyoka
Umbutho weKhadi leTarot: Umlawuli (IiAries) kunye Inqaba (EyoKwindla)
Ukuphilisa Amakristali: Iamethiste , Ilitye legazi , Carnelian , Ikorale , Malachite , URose Quartz
IiAries zoSaziwayo: U-Erica Jong, uElton John, uVictoria Beckham, uLady Gaga, uVincent Van Gogh, uThomas Jefferson
Ukuhambelana kweAries, kuthando kunye nakwibhedi
Kubudlelwane iRam inokuba ngumthandi, ingoyiki ukuzama izinto ezintsha. Abahlobo abalungileyo kwiiAries Leo kwaye Isagittarius ilandelwe okwesibini ngu IGemini kwaye U-Aquarius .
Ngaba ufuna ukwazi ngakumbi? Funda ngokupheleleyo Iprofayile yokuhambelana kweAries .
Igama elithi nap alikho kwisigama seRam. Uya kuba nethamsanqa lokuba ungene ebhedini ebusuku. Kuninzi kakhulu ukubona nokuyenza, kwaye umntwana wakho we-Aries ufuna konke. Kukho umdla osasazekayo ngaba bantwana otsala abanye.
Nokuba ungaphi na inani labahlobo, nangona kunjalo, iRam yakho ifuna ukuphuma ngaphezulu kwepakethi. Ukuba abakwazi okanye ukuba abahlobo babo abakwazi ukuqhubeka, bakhawuleza bakhathazeke kwaye bayancama, badlulele kwenye into.
Nokuba bangakanani ngeminyaka, uya kuyifumana iRam yakho ingoyiki ukuthetha ngengqondo yabo. Basenokungabambeli kumcimbi osuse impendulo enamandla, kodwa akukho mntu uya kuwulibala. Yiloo nto umlilo kunye Mars element umntwana wakho. Akamiselwanga kwimo yozakuzo nangaliphi na ixesha kungekudala.
ICEBISO: I-Aries abantwana bayazuza ngakumbi 'kumaxesha amafutshane' kunangxabano yabazali.
Ngaba ufuna ukwazi ngakumbi? Funda ngokupheleleyo Iprofayile yeenkwenkwezi yeAries yomntwana .
Intombazana eyi-Aries inokuba ngumdlalo weklasikhi, uhlala ekulungele ukuphendula ngokukhawuleza kuyo nayiphi na imeko.
Akayi koyika kuvavanyo okanye ubuganga, kwaye eneneni uyaphumelela ekuzibonakaliseni. Uninzi luba bubuntwana ngokuzonwabisa kwabo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuthembela ligama lakhe eliphakathi, elidityaniswe noluhlu oluzimeleyo oluqinileyo.
Intombazana eyi-Aries ayizukuthanda abantu abaphetheyo, kwaye iya kuzinyathela izithende zayo kwaye ingene xa ijongene nale ndlela. Abazali banokuba nengxaki yokugcina igunya labo kumhlaba oqinileyo.
Ngaba ufuna ukwazi ngakumbi? Funda ngokupheleleyo Iprofayile yobuntu beAries .
Inkwenkwe eyi-Aries idibana nehlabathi ngonyawo olubonakala ngathi lwazi ngokwemvelo kodwa lunokudida abanye. Uya kuhlala ngonaphakade kwimfuno enkulu elandelayo, eyabamangalisa kakhulu (nangona iyinto ekhathaza umama notata).
Olu Phawu loNyana (uya kusazi, sithanda iipun puns) alunakuze luqikeleleke okanye lulungele kwibhokisi yomzekeliso. Oku kubenza babe bhetyebhetye kwaye bakwazi ukoyisa imiceli mngeni emininzi eya kuthi ishiye abanye abantwana belila. Umceli mngeni kubazali kukulinganisa ukuzithemba okukhulu kunye nedosi esempilweni yokwenyani.
iplanethi ekufutshane nelanga ngolungelelwano
Umsebenzi we-Aries, izilwanyana zasekhaya kunye nexesha lokudlala
Ukufumana umsebenzi akukho nzima kwiRam. Umsebenzi wabo wokuziphatha wenza ukuba kube lula ukuvula iingcango nokuba uqoqosho alwenzi mdaniso owonwabileyo. I-Ram isebenzisa ukuzithemba okunyanisekileyo kwizakhono zabo ukuphumelela abo banokuba ngabaqeshi babo.
Iinkunzi zeegusha ziqhuba kakuhle kakhulu kwintengiso-ungathengisa isanti entlango! ImiSebenzi yezemidlalo ikufanela njengokuba usenza nzima kwaye ukhawulezisa ishishini.
Ii-Aries zifuna isilwanyana esigcina indlela yokuphila esebenzayo kakhulu, ke inja enamandla inokuba ilungile.
Okubangela umdla kukuba, ezinye iiRams zikhetha isidalwa esincinci esilondolozo esisezantsi ukuze bangakhathazeki ngaso.
Nantoni na enokhuphiswano kwaye etshisa amandla ibhenela kwi-Ram. Banokuthi bathathe inxaxheba kulwazelelo ngokutsha lwembali lokuzibandakanya 'neMars', umzekelo.
Uninzi lwama-Aries luyakuthanda ukusebenza kwangaphandle njengokusebenza, i-rollerblading, njl.
Kunqande ukusebenza xa uthenga iRam. Bafuna into eyonwabisayo kwaye ivuselele, ngakumbi ukuthengisa okuncinci okanye okusika!
Nceda ii-Aries zakho zihambe ngaphambi komdlalo kubuchwephesha okanye ubanike i-glinky trinket abanokuyibonisa.
Ngenye indlela nantoni na enxulunyaniswa nokutya ihamba indlela ende yokwenza iRam incume.
ibhinqa le-scorpio kunye nendoda yothando iyakuthanda ukuhambelana
Leo mfazi kunye nendoda yescorpio ngesondo